किन्ने हो डर्ट वाइक ? यस्ता छन् अप्सन - MeroAuto
किन्ने हो डर्ट वाइक ? यस्ता छन् अप्सन
2076:6:19 8:11 AM
काठमाडौं । अफरोड राइडिङका साथै एडभेन्चर राइडरहरुले पहिलो रोजाइमा हुने गर्छ डर्ट मोटरसाइकल । आजकल सहरी क्षेत्रमा समेत डर्ट मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको पाइन्छ । अफरोड भर्सनमा निर्माण हुने डर्ट वाइक युवापुस्ताको विशेष रोजाइमा पर्ने गर्छन् । आरामदायी सस्पेन्सन, डर्ट बाइक, उच्च पर्फमेन्स, पावरफुल इन्जिन, आकर्षक लुक्स तथा बडिको डिजाइन कारण चर्चामा आउने गर्छन । जस्तोसुकै सडकमा सहजै गुड्ने भएकाले पनि टाढा र अप्ठ्यारो सडकको यात्राको लागि यस्ता वाइकको छनौट गरिन्छ ।
सुरुवाति मूल्य ३ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि नै यस्ता एड्भेन्चर मोटरसाइकल किन्न सकिएपनि महंगा मूल्यका वाइक हिरो, होन्डा, रनर, क्रसफायर, हाडफोर्ड, यामाहा, हस्की, राइजु जस्ता ब्रान्डले नेपाली बजारमा डर्ट बाइक बिक्री गर्दै आएका छन् । नेपाली बजारमा उपलब्ध डर्ट वाइक मूल्य र विशेषता यस्तो छ ।
होन्डाका डर्ट बाइक
होन्डाको एक्सआर १५० एल र एक्सआर १९० एलएच होन्डाको चर्चित डर्ट वाइक हो । यी बाइकको मूल्य क्रमश ४ लाख ८४ हजार ९ सय र ५ लाख ९४ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, एक्सएल १९०एल एच कम्पनीको निक्कै रुचाइएको डर्ट बाइक अन्र्तगत पर्नेगर्छ । यस्तै कम्पनीले नेपाली बजारमा डर्ट वाइकहरु एक्सआर १२५ एल, सिआरएफ २५० एल, सिआरएफ २५० एल र्याली बिक्री गर्दै आएको छ ।
यामाहा एक्सटिजेड १२५
एमडब्ल्यु इन्टरप्राइजेजले बिक्री गर्दै आएको डर्ट वाइक एक्सटिजेड १२५ को मूल्य ३ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ । यसमा १२४ सीसी एयरकुल्ड फोर स्ट्रोक इन्जिन छ, जसले १२‍.३३ एचपी पावर र ११.६ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । यामाहाले पहिलो पटक नेपाली बजारमा ल्याएको अफरोड डर्ट वाइक यहि हो । यो वाइकलाई पहिलो पटक गत नाडा अटो शो २०१८ मा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
एसडब्ल्युएम ३०० आर
अर्थमुभरले बिक्री वितरण गर्दै आएको इटालियन ब्रान्डको एसआर ३०० आर डर्ट वाइक । यो मा २९७.६ सीसी सिंगल सिलिन्डर, लिक्वीड कुल्ड, डिओएचसी ४ भल्भ, ४ स्टोक इन्जिन रहेको डर्ट मोटसाइकल निकै पावरफुल र स्टाइलिस वाइकको रुपमा परिचित छ ।
यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स ३०० एमएम रहेको छ । ७.२ लिटरको इन्धन ट्याङक लगाइएको यो वाइकको तौल १०७ केजी रहेको छ भने मूल्य १६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नेपाली बजारमा क्रश फायरको डर्ट वाइक विशेष रुचाइन्छ । हाल, यहाँ क्रश फायर ब्रान्डका विभिन्न वाइकको बिक्री वितरण भैरहेको छ । कम्पनीले नेपालमा डर्ट वाइकहरु एक्सजेड ४५० आरआर मोटरार्ड र एक्सजेड४५० आरआर अफरोड , क्रशफायर एक्सजेड २५० आरआर मोटरार्ड, एक्सजेड २५० आरआर बिक्री गरिरहेको छ ।
एसियन बिस्ट ब्रान्डका तीन डर्ट वाइक नेपाली बिक्री भैरहेका छन । गत जनवरिबाट बिक्री वितरण सुरु भएको एसियन बिस्ट २५० को तीन भेरियन्टले राम्रो बजार पाइरहेका छन् । उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स तथा सिट हाइट भएको यो बाइक मोटरार्ड, डर्ट र सेमी डर्टमा उपलब्ध छ । यतिमात्रै नभई नेपालमा क्रसएक्स, यूएम, हार्टफोर्ड, टेक्कन, हस्क भर्ना आदि ब्राण्डका डर्ट वाइक उपलब्ध छन् ।
मोटरसाइकल छाडेर कम मूल्यक...
कारको क्लच बचाउने ४ तरिका